ဆေးစက်ကျရာ အပိုင်း (၃) | HapEye %
Lelt Lelt Win Thant
ဆေးစက်ကျရာ – အပိုင်း (၃)
ဆေးစက်ကျရာ – အပိုင်း (၁) ကို ဖတ်ရှုလိုပါလျှင် အောက်ဖော်ပြပါ link မှတဆင့် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://hapeye.net/archives/6847
ဆေးစက်ကျရာ – အပိုင်း (၂) ကို ဖတ်ရှုလိုပါလျှင် အောက်ဖော်ပြပါ link မှတဆင့် ဝင်ရောက်ဖတ်ရှုနိုင်ပါသည်။ https://hapeye.net/archives/6856
မီသည် အင်မတန် အိမ်ထောင်ရေး ကံကောင်းလှသူကလေးတည်း။ မီ ကိုကိုနှင့် လက်ထပ်လိုက်သောအခါ သီမှ တစ်ပါး မီ့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ လူအားလုံးက မီ့ကို အိမ်ထောင်ကျကံကောင်းသူကလေးအဖြစ် ဝိုင်းဝန်းထောမနာပြုကြ၊ အားကျကြရလေသည်။ မီ ရွေးချယ်ခဲ့သူမှာ ရုပ်ရည်၊ ငွေကြေး၊ ပညာဘာတစ်ခုမှ ပြောစရာမရှိအောင် ပြည့်စုံလှသူဖြစ်သည်။
မီသည် ကိုကို့ကို အချစ်တစ်ခုတည်းအတွက် ရွေးချယ်ခဲ့တာတော့ မဟုတ်ချေ…။ ကိုကို ပိုင်ဆိုင်သော ဂုဏ်ဒြပ်တို့ကို မီကလည်း စုံမက်မိချေသေး၏။ အိမ်ထောင်ပြုလိုက်ခြင်းဖြင့် မီ့ဘဝသည် လက်ရှိထက် ပို၍မြင့်မားသွားမည်မှာလည်း သေချာ၏။ ကို့ ပြည့်စုံမှုများစွာက မီ မက်မောခဲ့ရသော မီ့အလုပ်၊ မီ ကျော်ကြားမှုတို့နှင့် လဲလှယ်ရဲလောက်အောင် ထိုက်တန်သည်ဟု ထင်မိ၏။ မီသည် ကိုကိုနှင့်အတူ လူနေမှုအဆင့်အတန်း မြင့်မားဖွံ့ဖြိုးသော နိုင်ငံတွင် နေထိုင်ရင်း မီ ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသည့် သာမန်မိသားစုဘဝထက် ပို၍ မြင့်မားသော ဘဝတစ်ခုကို ထူထောင်မည်ဟု ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့၏။ မီ့ အိမ်ထောင်ရေးဟာ အများတကာက မော့ကြည့်အားကျရလောက်သော သာယာပြည့်စုံသည့် အိမ်ထောင်ရေးပဲ ဖြစ်ရမည်ဟု မီက အပြည့်အဝ ယုံကြည်ထားလေသည်။
ကိုကိုနှင့် လက်ထပ်ခါနီးအချိန်ကာလတွေမှာတော့ မီ မဆိုစလောက်ကလေး စိတ်ဆင်းရဲခဲ့ရပေသည်။ ကိုကိုတို့ အသိုင်းအဝိုင်းသည် မီတို့ အသိုင်းအဝိုင်းထက် ပို၍ မြင့်မားလှသော အသိုင်းအဝိုင်းဖြစ်ပေရာ မင်္ဂလာကိစ္စ စီစဉ်ရာမှာ မီ့ သဘော၊ မီ့မိသားစုရဲ့ သဘောက သိပ်ပြီး အရေးမပါ အရာမဝင် လှချေ…။ မင်္ဂလာဖိတ်စာ ဖိတ်တာတောင်မှ ကိုကိုတို့ဘက်ကိုသာ ဦးစားပေးရသဖြင့် မီ့ဘက်ကလူများကို မျက်နှာပူစွာ ချန်ရစ်ရလေသည်။ ပြီးတော့ မီ့ယောက္ခမများကလည်း အလွန် ဂုဏ်မောက်လှပြီး မျိုးရိုးစဉ်ဆက်က ချမ်းသာလာခဲ့သော အထက်တန်းလွှာ အသိုင်းအဝိုင်းကဖြစ်လေရာ မီ့လောက်ကိုတော့ တယ်ပြီး အထင်မကြီးလှချေ…။ မီသည် မီ့ဘာသာဆို မီ့နယ်ပယ်မှာ မသိသူမရှိအောင် ကျော်ကြား ဂုဏ်ရှိလှသူဖြစ်သော်လည်း ယောက္ခမများရှေ့ ရောက်လျှင်တော့ သိမ်ငယ်ငုံ့လျှိုကာ နေရလေသည်။ သို့သော် ကိစ္စမရှိ၊ မီသည် ကိုကိုနှင့်အတူ နိုင်ငံခြားတွင် လိုက်ပါနေထိုင်ရမည့်သူဖြစ်၍ ဒီက ကိုကို့အသိုင်းအဝိုင်းနှင့် အမြဲ နီးစပ်ပတ်သက်နေဖို့မလို။ မီတို့ဘာသာ နှစ်ယောက် တစ်ဘဝ ထူထောင်လိုက်ရုံပဲ ဖြစ်သည်။ မီသည် တစ်ခဏတော့ သည်းခံရပေသေး၏။
ကိုကိုနှင့်အတူ နိုင်ငံခြားသို့ လိုက်ပါခါနီးအချိန်မှာတော့ မီသည် မျက်ရည်စက်လက် ကျန်ရစ်ခဲ့သော မီ့မိသားစုကို ကြည့်ကာ ရင်နှင့်ရလေသည်။ အို .. မေမေရယ် မငိုပါနဲ့၊ မေမေ့မှာ နှလုံးရောဂါရှိတယ်၊ မေမေ စိတ်ဆင်းရဲမခံပါနဲ့နော်။ ဖေဖေ့မှာလည်း သွေးတိုးရောဂါရှိတာပဲ။ လေယာဉ်ကြီး ထွက်သွားရင် ဖေဖေ သွေးတိုးပြီး ကျန်ရစ်ခဲ့မှာလား။ မောင်လေးရယ် နင် လျှောက်လျှောက်သွားမနေနဲ့…၊ ဖေနဲ့မေကို ဂရုစိုက်ဦး နော်။ မီသည် နှုတ်မှ မှာခဲ့ပြီးဖြစ်သော်လည်း စိတ်မှာအထပ်ထပ် မှာမိပြန်၏။
မီသည် ဝမ်းနည်းလှသည်ဖြစ်သော်လည်း “အိမ်ထောင်ပြုရင် မိဘနဲ့ ခွဲရမှာ ထုံးစံပါပဲ” ဟု တွေးကာ အားတင်းရ၏။ “သူတို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ ပိုက်ဆံကို ငါပို့ပေးနိုင်သားပဲ”ဟု တွေးကာ ဖြေရ၏။ ရင်ထဲမှာ မိသော်လည်း ဒီ ယောက်ျားအပေါ် ချစ်ရခြင်း၊ ဒီယောက်ျားအတွက် ဂုဏ်ယူရခြင်း၊ လက်ရှိဘဝထက် မြင့်မားသော ဘဝတွင် နေထိုင်ရခြင်း စသည့် အခြေအနေများကို စွန့်လွှန့်ဖို့အထိတော့ သတ္တိမရှိချေ။
ကိုကို နေထိုင်သော အရပ်ကိုရောက်သောအခါ အဦးအစမှာတော့ နေရာ အသစ်အဆန်းများသို့ သွားလာလည်ပတ် ပျော်ရွှင်ခွင့်ရ၏။ သို့သော် အချိန်တန်၍ ကိုကိုအလုပ်သွားသောအခါမှာတော့ မီသည် ယောင်ချာချာ ကျန်ရစ်ရလေသည်။ တစ်နေ့လုံး မီ့အနားမှာ စကားပြောဖော်မရှိ။ အိမ်နီး နားချင်းတွေနဲ့လည်း တရင်းတနှီး ကူးလူးဆက်သွယ်လို့မရ။ မီ ဒီလိုနေ့တွေကို ဘယ်လို ဖြတ်သန်းရပါမည်နည်း။
မြန်မာနိုင်ငံမှာတော့ သိပ်မချမ်းသာလှသော မီတို့အိမ်မှာ အိမ်ဖော် နှစ်ယောက်တောင် ရှိ၏။ ဒီမှာတော့ အိမ်ဖော်လည်း မရှိတာမို့ မီသည် အိမ်မှုကိစ္စများကို တစ်ယောက်တည်း ကြုံရုန်းလုပ်ရ၏။ စာရွက်ကလေးတွေကို သာသာလေး လှန်လှောခဲ့သည့် မီ့ရဲ့ ချွန်ကော့သွယ်မျောသော လက်ကလေးများသည် ခုတော့ ပန်းကန်ဆေးအိုးတိုက် လုပ်ရပြီ။ အိမ်မှုကိစ္စပြီးလျှင် တီဗွီကြည့်ရင်း စာဖတ်ရင်း တစ်နေကုန်သွားအောင် စောင့်မျှော်ရသည်မှာ အလွန် စိတ်ပင်ပန်းရလေသည်။
မီသည် မျက်လုံးမှိတ်လိုက်တိုင်း အသံသာကလေးဖြင့် စာသင်ပြခဲ့ရသော စာသင်ခန်းလေးကို မြင်ယောင်မိ၏။ အဲ့ဒီမှာ မီ့ ရပ်တည်မှု ရှိ၏။ အဲ့ဒီနိုင်ငံမှာ မီ့ရပ်တည်မှုရှိ၏။ မီသည် “ရပ်တည်မှု” ဆိုသော စကားရဲ့ အဓိပ္ပာယ်ကို ခုမှ သဘောပေါက်ခဲ့ရလေသည်။
ဒီမှာတော့ … မီ့ရပ်တည်မှုတွေအားလုံး ပျောက်ဆုံး နေခဲ့သည်။ မီ့နိုင်ငံမှာ တစ်စုံတစ်ယောက် ဖြစ်ခဲ့သော မီသည် ဒီနိုင်ငံမှာတော့ သာမန် အိမ်ရှင်မတစ်ယောက်သာဖြစ်၏။ မီ အနှစ်နှစ်အလလက ဆည်းပူးခဲ့သော ပညာရပ်များသည်လည်း ဒီနိုင်ငံမှာတော့ ဘာမှအသုံးမဝင်တော့ချေ။ မီသည် ကိုကို့ဇနီး အဖြစ် ကိုကိုနှင့်အတူ တွဲဖက်၍ ပွဲတက်ရသည့် အချိန်အချို့မှာသာ ပျော်သလိုလို ကျေနပ်သလိုလို ရှိသော်လည်း နေ့တစ်ဓူဝ ဖြတ်သန်းရသော အချိန်တွေမှာ၊ အထူးသဖြင့် မိုးလင်းက မိုးချုပ် ကိုကို အလုပ်သွားနေသော အချိန်များမှာတော့ မီ့ရပ်တည်မှုဟာ ပျောက်ဆုံးနေသည်ဟု ထင်မိ၏။ လိုတရဘဝဖြင့် ကြီးပြင်းလာခဲ့ရသော ကိုကို့ အတ္တများ၊ ကိုကို့ လိုအင်များကို လိုလေသေး မရှိအောင် ဖြည့်ဆည်းပေးရင်း မီ့အတ္တသည် အလိုလို မှိန်ဖျော့ သွားခဲ့၏။
နှစ်အနည်းငယ်ကြာသောအခါ မီ့ဖေဖေ ဆုံးပြီဟု သိရ၏။ မီသည် ဖေဖေ့အတွက် ဘာမှလုပ်ပေးခွင့် မရလိုက်။ နောက်နှစ်အနည်းငယ် ကြာသောအခါ မေမေ နေသိပ်မကောင်းကြောင်း သိရသဖြင့် ပြန်ဖို့စီစဉ်နေဆဲမှာပဲ မေမေ ဆုံးကြောင်း သိလိုက်ရ၏။ မီသည် ဖြေမဆည်နိုင်သော စိတ်ဖြင့် ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် အပြစ်ရှိသူဟု ခံစားခဲ့ရလေသည်။ အများတကာရဲ့ ချီးမွမ်းအားကျမှု၊ မီလိုချင်သော ဘဝမြင့်မားမှုနှင့် အချစ်အတွက် ပေးဆပ်ခဲ့ရတာက မီ့တစ်ဘဝစာ အတ္တတွေပဲဖြစ်သည်။
မီသည် ဆေးတစ်စက် ဖြစ်၏။
ခုချိန်မှာတော့ ဆေးစက်ကလေး မဟုတ်တော့ပြီ ဖြစ်သော မီသည် သမုဒ္ဒရာက လှိုင်းထန်လျှင် စိတ်လှုပ်ရှား ပူပန်လိုက်၊ သမုဒ္ဒရာက အေးမြလျှင် ကိုယ်လည်း အေးချမ်း သာယာလိုက်ဖြင့် သမုဒ္ဒရာနှင့်အတူ လိုက်ပါစီးမျောရင်း “ရပ်တည်မှု” အကြောင်း ပြောပြခဲ့ဖူးသည့် သီ့ကို သတိရနေခဲ့မိလေသည်။
သီ့ဘဝကရော ဘယ်လိုများလဲ ?
စာရေးဆရာမ ပုညခင်ရေးသားထားသော နှင်းဆီရနံ့ ဝတ္ထုတိုများ စာအုပ်မှ ကူးယူဖော််််််ပြသည်။
“ရှင်က ဘာ Post လျှောက်မှာလဲ၊ Marketing လား” “နိုး.. နိုး… ကျုပ် ဒါမျိုးမလျှောက်ဘူး၊ ကျုပ် လျှောက်ထားတာက ခင်ဗျားတို့သူဌေးရဲ့ အတွင်းရေးမှူးနေရာလေ၊ Secretary Post ပဲ ဆိုပါတော့”…
“မိကျောင်းမင်း ရေကင်းပြ၊ ဘုန်းကြီးစာချ” ဟူသော စကားပုံတို့က ဆရာကသာ တပည့်ကို ဆုံးမရမည်။ တပည့်ဖြစ်သူက ဆရာအား မဆုံးမရဟု ပြနေသည်။ ထိုစကားပုံတို့သည် . . .
သူသည် အဓိပတိဖွား၊ တနင်္လာသားပီပီ သူ့ကိုယ်သူ ယုံကြည်မှုအပြည့်အဝရှိသူ ဖြစ်သည်။ သူ့ဘဝဟာ ဘယ်တော့မှ နိမ့်နိမ့်ပါးပါး မဖြစ်နိုင်၊ ဒါကို သူက …